Best Copper fakan-ny fanesorana mitete kasety Manufacturer and Factory |DAYU
Kasety mitete ny fakany varahina
MOQ: 1 horonana
Habetsan'ny entana entana: 2.1 miliara metatra / volana
Karazana: fanondrahana sy fanondrahana hafa
Toerana niaviany: Tianjin, Sina
Takelaka data SD1618203ST
Haavony (mm): 0.18mm, 0.2mm
Dripper elanelana (mm): 200 300 500mm
Fikoriana mitete[0,50](L/h):1,8L/h 2,4L/h 3L/ora
Sivana: 120 mesh 120
Mety: Mety amin'ny voly eny an-tsaha, fakan-kazo marivo, mamela ny voly mivelatra.
Fenitra ara-teknika: GB/T19812.3-2017
Roll halavan'ny: 1000/roll, 2000m/roll, 2500m/roll, 3000m/roll na ampanjifaina
Akora manta: PE
Lateral Halava: 48-78m
1. Mould ny dripper indray mandeha;
2. Ny dripper miaraka amin'ny varavarankely fanivanana, manana ny fomba vaovao malalaka sy lava fantsona fantsona;
3. Ny dripper dia manana faritra malalaka ho an'ny fanivanana sy ny haben'ny fizarana fantsona fantsona, noho izany dia matanjaka ny fanoherana fanakanana;
4. Ny rano dia mikoriana mikoriana, ary ny haavon'ny antonony leakage rano dia latsaky ny 5%;
5. Ny dripper dia welded mivantana ao anatin'ny sodina, noho izany ny fanerena very dia kely ary ny irrigtion marina dia avo.
6. Ny rano voavonjy dia mety hahatratra 30-40%, ary ampitahaina amin'ny fomba fanondrahana mahazatra.
1. Ny hatevin'ny rindrina samihafa dia mety amin'ny taona sy ny tontolo iainana samihafa ampiasaina;
2. Ny fikorianan'ny rano sy ny elanelan'ny dripper dia mety amin'ny habetsaky ny fitakiana rano amin'ny voly;
3. Mora ny mametraka, mitatitra ary mampiasa;
4. Ny vidin'ny tetikasa dia ambany, ary ny fahombiazan'ny rano dia avo.
Fanerena miasa: 40 ~ 120kpa:
Faritra mety:voly eny an-tsaha nafafy andalana, trano fonenana lehibe, hazo fihinam-boa, voaloboka.
Nahoana no mampiasa fanondrahana rano mitete ambanin'ny tany?
Ny fampiasana rano mahomby kokoa, ny SDI dia mitahiry rano miaraka amin'ny fihenan'ny etona sy ny fivoahana lalina
Ny fihenan'ny fandotoana ny rano ambanin'ny tany, ny SDI dia mampihena ny fandotoana ny otrikaina entin'ny fanondrahana tafahoatra sy ny tsy fitoviana.
Ny SDI dia manome fitaovana fitantanana mahomby indrindra amin'ny fandefasana ny rano sy ny otrikaina mivantana amin'ny fakan'ny zavamaniry amin'ny fotoana marina sy amin'ny habetsahana ilaina.
Mampitombo ny hektara voatondraka, SDI manondraka ny saha manomboka amin'ny zoro ka hatrany amin'ny zorony ary mora mampifanaraka amin'ny fonosana kely sy hafahafa
Manatsara ny sakafon'ny zavamaniry, ny otrikaina entin'ny rano fanondrahana dia ampiharina mivantana amin'ny fakan'ny zavamaniry.
Mampihena ny fitomboan'ny ahi-dratsy, ny SDI Irrigation dia mamokatra ambonin'ny tany maina kokoa ary mampihena ny tsimok'aretina
Mamela ny fampiasana rano voadio tsy misy fiantraikany ratsy amin'ny tontolo iainana.Manaraka ny lalàna mifehy ny tontolo iainana sy ny fahasalamam-bahoaka izay mandràra ny fanondrahana ny voly sasany amin'ny rano voahodina.
SDI fotoana fohy
Ny androm-piainan'ny rafitra dia 3 ka hatramin'ny 10 taona.
Ampiasaina matetika amin'ny voly antonony
Fantsona mitete matetika napetraka eo anelanelan'ny 3″ sy 10″ amin'ny tany
Natao hanomezana ny tampon'ny fitakiana ET amin'ny voly
SDI maharitra ela
Ny androm-piainan'ny rafitra 20+ taona.
Ampiasaina matetika amin'ny voly entam-barotra
Ny fantsona mitete matetika napetraka eo anelanelan'ny 12 ″ sy 18 ″ amin'ny tany
Natao hampiasana ny fahafaha-mihazona ny tany sy ny fotoana fanondrahana mba hahazoana vokatra ambony indrindra
Fanerena & tahan'ny fikorianan'ny
Ataovy azo antoka fa miasa araka ny tsindry ilaina ny rafitra.Ilaina ny fanaraha-maso ny fanerena sy ny fikorianan'ny rafitra mba hiantohana ny fampandehanana ambony indrindra sy ny fiainan'ny rafitra ambony indrindra.
Ilaina ny fanaraha-maso ny fahombiazan'ny sivana.
Ny fepetra takian'ny filtration dia miovaova arakaraka ny kalitaon'ny rano, ny famaritana ny dripper, ary ny antony hafa.Ny fepetra fikojakojana ny sivana dia miovaova arakaraka ny karazana sivana (ecran, disk, media, sns.) sy ny kalitaon'ny rano.
Ny tsindrona asidra dia afaka mampihena ny rotsak'orana vokatry ny loto simika.Ny fanasan'ny asidra (fitsaboana ny fahatairana) dia mety hampihena ny firongatry ny loto ao amin'ny tsipika mitete.
Ny tsindrona chlorine dia mametra ny fitomboan'ny loto biolojika / organika toy ny alga, bakteria & fotaka.
Ny chlorine dia mamadika ny vy sy manganese, ho lasa sira tsy mety levona izay azo sarahina amin'ny rano, ary mampihena ny bakteria solifara.
Fitantanana ny bibikely
Ny fikojakojana ny bibikely dia asa ilaina amin'ny fikojakojana mandritra ny vanim-potoana.
Inona no tokony hodinihinao alohan'ny hisafidianana SDI System
Fandrindrana saha- Endriky ny saha sy habe
Fepetra an-tsaha- Karazan-tany, halalin'ny tany ambony, karazana tany ambanin'ny tany, havoana ary topografika
Rano- Ny fisiana, ny habetsahana ary ny kalitao (tsy maintsy atao ny fitiliana ny kalitaon'ny rano)
voly- Karazana, fepetra ary fihodinana
Fomba fanao ara-kolontsaina- Fitsirian'ny masomboly, fanaon'ny tany ary fijinjana
Ny vokatra tsipika mitete- Ny savaivony, ny hatevin'ny rindrina, ny elanelan'ny emitter, ny tahan'ny fikorianan'ny rivotra ary ny fepetra takian'ny sivana
Toerana misy tsipika mitete- Ny halaliny, ny halaviran'ny laterals, ary ny fifandraisany amin'ny voly
Ny singa sy ny toerana misy ny rafitra- Paompy, sivana, fanaraha-maso, valva fanaraha-maso, tsipika (mainty, sub-mainline, ary manifold), valva fanalefahana rivotra, ary tsipika mitete
Fanaraha-maso- Tokony hojerena ny tahan'ny fikorianan'ny rafitra sy ny fanerena mba hiantohana ny fampandehanana ambony indrindra sy hanamafisana ny fiainan'ny rafitra
Fomba fikojakojana-Ny fikojakojana mahazatra dia ilaina amin'ny faharetan'ny rafitra sy ny fampisehoana tsara indrindra
Ny rafitra anatiny amin'ny dripper dia mampiasa diaphragm elastika mba hifehezana ny tsindry sy ny fanaraha-maso ny fikorianan'ny;
Ny androm-piainany dia mihalava tsara amin'ny alàlan'ny tsindrona silicone membrane;
Ny lalana mikoriana natao manokana dia afaka manatsara ny fahaiza-manadio tena sy manohitra ny clogging;
Ny fitaovana manohitra ny UV dia mety amin'ny karazana toetr'andro rehetra;
Hery mekanika avo, fanoherana ny harafesina;
Ataovy azo antoka ny fanondrahana fanamiana, marina ary tsy miovaova, ao anatin'ny fanerena onitra.
Azo apetraka amin'ny tany na alevina;
Flowrate samy hafa Afaka misafidy avy;
Mety amin'ny tany samihafa sy ny hantsana amin'ny faritra fanondrahana.
Faritra mety:Mety amin'ny voly andalana any amin'ny faritra tendrombohitra na lavitra, zaridaina, tanimboaloboka ary windbreaker.
20 0.18 0.20.3 0.40.5 0.60.8 1.0 1.1 1.2
Miankina amin'ny Inlet
tsindry rano ary
Fanamarihana: Ny Emitters Spacing dia afaka misafidy amin'ny 100mm-2000mm
Fanondrom-pahombiazana amin'ny fanerena onitra:
Temperature mahatohitra ny
Mijanona miasa mandritra ny adiny iray amin'ny
Fanerena miasa ambony indrindra 1.5times.Tsy misy tapaka, tsy misy leakage
Tsy misy tapaka, tsy misy leakage
Adin-tsaina ara-tontolo iainana
Q—Hatezan'ny fikoriana(L/h) P—Tsindrina miditra(kpa)
Lafaoro karazana fantsona, Ma
Dispersion of Black
Fanaparitahana: Dispersion Grade≤3 Grade
teo aloha: Reel sprinkler machine
Manaraka: milina fanondrahana pivot sprinkler afovoany
anatiny inlay drip Sodina fanondrahana (lava roa)
kasety fanondrahana labyrinth elatra tokana
nalevina kasety fanondrahana mitete
anatiny inlay mitete kasety
Kasety mitete tsindrin-tsakafo